Tetikasa sary an-tsitrapo ny fandriam-pahalemana fitaovam-piadiana | Famoronana an-tserasera
Pablo Gondar | | mpanakanto, Inspiration
Tetikasa sary manohana ny fandriam-pahalemana Fitaovam-piadiana misotro ronono dia tetikasa sary namboarin'i Anarana Yuji Tokuda sy Junya Ishikawa noheverina ho manatsara ny fihavanana miatrika ady amin'ny alàlan'ny a tabilao andianys izay anehoan'izy ireo ny tsy fitongilanan'ny samy hafa fitaovam-piadiana amin'ny alàlan'ny fampiasana voninkazo. Izy io dia asa tena manintona amin'ny ambaratonga hita maso satria mampiseho antsika amin'ny fomba tsotra hevitra iray miaraka amin'ny be sy ny maro fo sy fahatsapana.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ity tetikasa ity dia ny pejiny Malagasy aiza no ahafahantsika misintona maimaimpoana ny fitaovana rehetra aseho ao amin'ny Malagasy amin'ny kalitao azo ekena tsara raha afaka manonta ny maodelintsika manokana ary mandrisika ny hevitra amin'ity fandraisana an-tsary ity.
Natsangan'ny Japoney Yuji Takuda sy Junya Ishikawa (Tale artista sy mpamokatra ny tetikasa) Fitaovam-piadiana misotro ronono dia fandraisana andraikitra miaraka izay ny tanjony dia ny fanaparitahana ny hafatra fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny famolavolana. Nofaritan'izy ireo ho toy ny “hafatra mahafinaritra nefa amin'ny fotoana iray ihany ny fanentanana, izay nampivondrona ny zavakary erak'izao tontolo izao mahery sy tena miabo ». Raha ny fahitana azy dia manambatra ny mariky ny fitaovam-piadiana miaraka amin'ny sarin'ny voninkazo, ny hevitra hoe mitolo-batana na misintona fitaovam-piadiana tsy hivezivezy ho fiarovana ny fanoherana am-pilaminana.
Ahitana taratra ny fampisehoana an'ilay antsoina hoe ny hippies tamin'ny XNUMX, mpikatroka ady Vietnan iza no nampiasa ny tandindon'ny voninkazo hampiroborobo ny firehan-kevitr'izy ireo momba tsy fanaovana herisetra (manome voninkazo an'ireo polisy ary mametraka azy ireo amin'ny barin'ny basin'ny tafika).
ny famantarana sy marika Ny ady sy ny fandriam-pahalemana dia mizara amin'ny fomba manaitra ny zavatra vokarin'ny olombelona manohitra izay voajanahary. Rifles, grenady, tanky ary fiaramanidina maneho adyraha ny fo, ny voninkazo ary ny voromailala dia tandindona fandriampahalemana. Ny poppy dia nofidina ho fahatsiarovana ny nianjeran'ny maro toy ny firoboroboany teny amin'ny sahan'ny ady Flanders nandritra ny Ady Lehibe I, nanolotra ny lokony mena ho tandindona mety hisolo tena ny mandeha rà avy amin'ny hady.
Ao amin'ny pejy Malagasy an'ny tetikasa afaka mahita ny rehetra isika fitaovana sintonina tsy andoavam-bola. ny Malagasy Tena mahaliana sy mampiala voly izy io satria manana sary mihetsika sy mozika, ka mitantana an'ity tontolo ity tsara sy tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tetikasa sary an-tsitrapo ho an'ny fandriam-pahalemana fitaovam-piadiana efa misotro ronono